Intee ayay le'eg tahay awooda gaashaandhiga ciidamada Ukraine? AwdalMedia Awdal Media Intee ayay le'eg tahay awooda gaashaandhiga ciidamada Ukraine?
Intee ayay le’eg tahay awooda gaashaandhiga ciidamada Ukraine?
Sida laga soo xigtay Machadka Caalamiga ah ee Daraasaadka Istaraatiijiyada (IISS), Ukraine waxay leedahay 196,600 oo ciidan oo firfircoon. Tani waxay u qaybsantaa 125,600 oo ciidamada dhulka ah, 35,000 oo ka tirsan ciidamada cirka iyo 15,000 oo ciidamada badda ah. Waxa kale oo ay u yeedhi kartaa 900,000 oo kayd ah – oo ay ku jiraan maliishiyaad hubaysan – in kasta oo, sida sawirradii dhawaa ee dadka rayidka ah ee haysta qoryo alwaax ah ay muujinayaan, in aanay dhammaan ciidammadani ahayn kuwo si fiican u qalabaysan. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyy ayaa sidoo kale sheegay subaxnimadii Khamiista in muwaadiniinta Ukraine ay si sharci ah hub u qaadan karaan oo ay hub u siin karaan qof kasta oo rayid ah oo doonaya inuu dagaalamo.
Inta badan awoodda difaaca ee Ukraine waa mid dhulka ku salaysan, iyadoo waddanku ku faano in ka badan 2,000 oo taangiyo ah, 1,960 xabbadood oo madaafiic ah iyo 2,870 baabuurta gaashaaman. Ciidamada ayaa sidoo kale heysta ku dhawaad ​​400 oo gantaalaha riddada hawada ah kuwaas oo qaadi kara diyaaradaha Ruushka iyo helista gargaarka halista ah ee Nato, oo ay ku jiraan 2,000 oo hubka lidka taangiyada ah oo ay ugu deeqday UK. Awoodeeda hawadu waxay ka kooban tahay 146 diyaaradood oo weerar ah iyo 42 helikobter ah oo weerar ah.
Ukraine waxay leedahay laba markab oo kuwa dagaalka ah. Marka la eego in waddanku uu bariga dalkaas kula dagaallamayay waxa loogu yeero gooni-goosadka uu Ruushka taageero ee ka socda Bariga dalkaas tan iyo 2014-kii, ciidamada qalabka sida ayaa si wanaagsan u tababaran. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo miisaaniyad difaac u dhaxaysa $2bn ilaa $5bn, kuma faano awoodaha deriskeeda awooda badan. Waxaa loo maleynayaa in Ukraine ay u baahan doonto taageero caalami ah haddii ay doonayso inay haysato dhulkeeda.
W/Q Cabdi Caawiye
WhatsApp / call 0634115877
Xisbiga Wadani Oo Xukuumada Ku Dhaliilay Gurmad La’aanta Abaaraha
Banaanbax ka Dhan ah Dagaalka Ukraine Oo ka Socda Mooskow(Sawiro)
Iibka Shirkadda Twitter-ka Oo Saamayn ku Yeeshay Akoonada Been Abuurka ah.
Dr.Gaboose Oo Dalbaday In Deg-deg loo Ansixiyo Guddiga Diwaan-galinta Axsaabta